के मेनु मा नृत्य यो श्रम दिवस हो? | फ्रेड Astaire
फ्रेड Astaire नृत्य स्टुडियो - नयाँ विद्यार्थी विशेष
नयाँ बिद्यार्थी विशेष
नृत्य सुरु गर्नुहोस्!
नृत्य को लाभ
नृत्य को4स्तम्भ
नृत्य पाठ FAQs
बच्चाहरु र किशोर पाठ
प्यारा नृत्य पाठ
नृत्य को प्रकार
अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य परिषद
श्री फ्रेड Astaire
समाचार र प्रेस
मिडिया को लागी संसाधन
लाख मास्क आन्दोलन
एक स्टुडियो स्वामित्व
ब्लग र सामाजिक
अनलाइन पाठ प्लेटफार्म
अनलाइन पाठ जानकारी
निजी स्ट्रीमिंग पाठ
अनलाइन ट्रफी प्रणाली
के मेनु मा नृत्य यो श्रम दिवस हो?
यो श्रम दिवस भूतकाल को रूप मा उस्तै हुन सक्दैन तर यो कुनै कारण हामी अझै छुट्टी को आनन्द उठाउन सक्दैनौं। हामी मात्र यो गर्न को लागी बिभिन्न तरीकाहरु खोज्न आवश्यक छ।
परिवार संग एक घरपछाडि बारबेक्यू योजना? पार्टी चालू। तर चलो सक्रिय रहने बारे मा सोचौं यदि हामी परेड मा मार्च वा समुद्र तट मा जान सक्दैनौं। र नृत्य गरेर सक्रिय रहौं। यो आत्मा मनाउँछ, र हामी त्यो किन मनाउनु हुँदैन?
नृत्य को आधा घण्टा दौड को आधा घण्टा को रूप मा क्यालोरी जलाउन को लागी राम्रो छ ... र बाहिर फुटपाथ pounding भन्दा धेरै कम पसीना। तपाइँको फ्रेड Astaire नृत्य स्टुडियो तपाइँको लागी त्यहाँ छ तपाइँ तपाइँको नृत्य जुनून को लागी।
यी समय को समयमा, नृत्य हाम्रो आत्माहरु को लागी एक सान्त्वना हुन सक्छ। नृत्यले हामीलाई स्वस्थ र सक्रिय रहन, तनाव कम गर्न, र रिचार्ज गर्न मद्दत गर्दछ। र हाम्रो सबै नयाँ फ्रेड Astaire नृत्य Studios® अनलाइन पाठ मंच तपाइँ कहीं नृत्य को आनन्द लिन दिन्छ!
यो नयाँ कार्यक्रम संग, तपाइँ नृत्य पाठ भिडियो को एक व्यापक पुस्तकालय को ढोका अनलक गर्न सक्नुहुन्छ-धेरै शैलीहरु र प्रविधिहरु, सबै हाम्रो प्रमाणित प्रशिक्षकहरु र विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य परिषद सदस्यहरु को नेतृत्वमा। र अन्तिम मा घर नृत्य अनुभव को लागी, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य परिषद सदस्यहरु वा २०१ D नृत्य च्याम्पियन्स मध्ये एक को छनौट संग लाइभ स्ट्रीमिंग पाठ बुक गर्नुहोस्।
राम्रो लाग्छ, हैन? यसलाई यहाँ जाँच गर्नुहोस्: https://www.fredastaireonlinelessons.com/
यो बर्ष बिगतका बर्षहरु जस्तै धेरै जस्तो नहुन सक्छ तर हामी अझै पनी मनाउन र रमाईलो गर्ने तरिका पाउन सक्छौं! आज बित्नेछ र भोलि संकेत गर्छ। ती राम्रो बानीहरु अब बनाउनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस् र नृत्य संग फिट, र एक सुरक्षित र स्वस्थ श्रम दिवस सप्ताहांत छ!
एक स्टुडियो खोज्नुहोस्
परिचय प्रस्ताव पाउनुहोस्
१५१ खतरा Ave, सुइट १२, Enfield, सीटी ०151०12२ संयुक्त राज्य अमेरिका
पी: 413-567-3200 | एफ: 413-565-2298
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 Fred Astaire Dance Studios सेवाका सर्तहरू
हामीलाई तपाइँको नजिकै स्टुडियोहरु खोज्न मद्दत गर्नुहोस्! हाम्रो निकटतम स्थानहरु खोज परिणाम पृष्ठ मा प्रदर्शित हुनेछ।
मोडल बन्द गर्नुहोस्×
* एक आवश्यक क्षेत्र संकेत गर्दछ